Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) 8.1.269 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.1.269 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား စာအုပ္မ်ား & ရည္ညႊန္းခ်က္ Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!)
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
PDF ဖိုင်, EPub, EPUB3, Moby, DjVu, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX: Librera Reader ကို PRO တစ်ဦးမှသုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးအပါအဝင်လူကြိုက်အများဆုံးစာရွက်စာတမ်းပုံစံများ, ကိုပံ့ပိုးသောအလွန်အမင်း Configure လုပ်လို့ရတဲ့စာဖတ်ခြင်း App ဖြစ်ပါတယ် , TXT, RTF, AZW, AZW3, CBR, CBZ, HTML ကို, XPS, မထသနှင့်ပိုပြီး။
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့, သေးအစွမ်းထက်အင်တာဖေ့စဖွင့်နှင့်အတူ Librera Reader ကိုစာရွက်စာတမ်းတကယျ့အပျြောအပါးကိုဖတ်ရှုစေသည်။ Librera Reader ကိုပင် Configure လုပ်လို့ရတဲ့အရှိန်အဟုန်မှာ Auto-scrolling ကိုထောက်ပံ့မယ့်ထူးခြားတဲ့လက်အခမဲ့ဂီတပညာရှင်ရဲ့ mode ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
Librera Reader ကိုရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
option ကိုကြွယ်ဝခြင်းနှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့စာရင်းနှင့်အတူ✓လွယ်ကူစာရွက်စာတမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှု:
အသုံးပြုသူ-သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်တွဲများမှတစ်ဆင့်● auto-Scan ဖတ်
တစ်ဦး In-app ကိုဖိုင်ကိုရှာဖွေသူနှင့်အတူ● Browse ကိုကတ်တလောက်, disk တွေနှင့်ဖိုင်တွဲများ
(ကတိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်းဘားနှင့်အသုံးဝင်သောပညတ်တော်တို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ) ●အဆိုပါမကြာမီက folder ကို
bookmarks ကို (fixed နှင့်ရွှေ့ပြောင်း) နှင့်မှတ်စာများများအတွက်✓ပံ့ပိုးမှု
✓တစ်ဦးချင်းစီ Configure လုပ်လို့ရတဲ့နေ့နှင့်ညသည် Modes
ချဲ့စာမျက်နှာများ✓ auto- ဗဟိုပြု. နှင့်လက်စွဲစာအုပ် Center
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ scrolling မမြန်နှုန်းနှင့်အတူ✓ဂီတပညာရှင်ရဲ့ mode ကို
✓ Read-ကျယ်လောင်စွာစွမ်းရည်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်တစ်ဦး၏ TTS အင်ဂျင်များမှတဆင့်အလွန်ခေတ်မီဆန်းပြား (နှင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့) စာဖတ်ခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူ
ညာဘက် -to- လက်ဝဲဘာသာစကားများ (စသည်တို့ကိုထိုင်း, ဟီဘရူး, အာရဗစ်,) အတွက်✓ပံ့ပိုးမှု
လာမယ့် (သို့မဟုတ်ဘာပဲ) session များအတွက်✓နောက်ဆုံးဖတ်စာမျက်နှာမှတ်မိ
အွန်လိုင်း Catalogs (OPDS), စာအုပ်ရှာဖွေရေးနှင့် download ပြုလုပ်✓ပံ့ပိုးမှု
✓ RSVP (la Spritz စာဖတ်ခြင်းà) ဖတ်ရှုခြင်း
ပိုကောင်းတဲ့စာဖတ်အတွေ့အကြုံအတွက်ထုံးစံ CSS ကိုကုဒ်များအတွက်✓ပံ့ပိုးမှု
Librera Reader ကိုနှင့်အတူတဦးတည်းကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်နှင့်အရာဖိုလ်ဒါ scan မှ formats ရာသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏ Self-ထိန်းသိမ်းခြင်းစာကြည့်တိုက်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
စာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဇယားကွက်ပုံစံ၌သင်တို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုဖော်ပြရန်နှင့်သင်စသည်တို့လမ်းကြောင်းကို, အမည်, အရွယ်အစား, နေ့စွဲဖြင့် Filter ကိုလျှောက်ထားစာအုပ်တွေ sort .; နှင့်တိကျသောမှတ်တမ်းမှတ်ရာများသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းအုပ်စုများနေရာချထားကူညီပေးဖို့တောင် filter ကိုလည်းမရှိ။
အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများအလွယ်တကူ thumbnail ကိုအဖုံးများနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။
သင်ဖတ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများတစ်ဒေါင်လိုက်သာ mode ကို scrolling နှင့် page- သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ပညာရှိပြန်လှန်ခံရဖို့သတ်မှတ်ထားသို့သော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Librera Reader ကို PDF documents တွေအတွက်စာသားမ reflow နှင့်မှတ်စာများထောက်ခံပါတယ်။
volume ကိုသော့၏ Configure လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို, စိတ်ကြိုက် fore- နှင့်နောက်ခံ (အရောင်အဆင်းသို့မဟုတ် Solid-အရောင်) ။
ကောက်နှုတ်ချက် (သို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုစာမျက်နှာများ), ဘာသာပြန်ထားသော shared, ကူးယူနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အမှန်တကယ် Librera Reader ကိုတန်ဖိုးထားဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကထွက်ကြိုးစားရန်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်။
အခမဲ့ကြော်ငြာ-supported ဗားရှင်းနဲ့ Start နှင့်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်။ သငျသညျစိတျပကျြမရလိမ့်မည်!
သငျသညျယုံကွညျစိတျနေပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်ဒီအံ့သြဖွယ် App ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ (က PRO လိုင်စင် purchasing ဖြင့်ဖြစ်စေ) Librera PRO သို့သင်၏အခမဲ့ဗားရှင်းလှည့်စဉ်းစားပါပါ။
ဟောင်းများအမည်များ: Lirbi Reader ကို, PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို PRO
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) အား အခ်က္ျပပါ
arsene-lupin စတိုး 53.78k 11.79M
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.1.269
App Name: Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!)
Release date: 2019-09-10 16:08:28
လက်မှတ် SHA1: A4:0F:2F:32:B0:71:13:2A:0C:CA:D8:FA:1B:C4:AD:D3:16:B8:EB:92
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ivan Ivanenko
နိုင်ငံ (C): 38
Librera PRO - eBook and PDF Reader (no Ads!) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ